E nwere obere, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, nke dị ọhụrụ n'ụwa a. Enwere uzo di iche iche nke agba ochie, ihe kariri karia ndi ikpe-azu. Ihe niile dị ndụ na-amụta site na iṅomi, anyị na-amụta nke ọma na amaghị ihe site na onye ọ bụla anyị zutere.
Ndị ama ama ama ama ị maara na ha amụtala azụmahịa ha site na iṅomi ndị ọzọ ma ọ bụ nweta echiche dị ugbu a na imeziwanye ma ọ bụ mee ka ọ dịkwuo ịrụ ọrụ nke ọma ma bie uru maka ha - onye ọ bụla n'ime ha!
Ezigbo ihe a bụ ịchọta ndị mmadụ na-eme kpọmkwem ihe ịchọrọ ime na ndị rụzuru ihe ịchọrọ ịme - wee dezie ihe ha na-eme. Ndị a nwere ike ịdị ndụ ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ, na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ọzọ ọ bụrụhaala na ha na-anọchite anya echiche na mgbaru ọsọ i setịpụtara n'onwe gị. Na-amụ ha na àgwà ha, ụzọ ha si arụ ọrụ, usoro ịhazi, ụzọ ha si ebi ndụ, ihe niile.
Anaghị m ekwu na ọ bụ ihe mgbokwasị ha mana ọrụ iji ghọta ihe omume ha ma tinye ha na ndụ gị. Ị nwere ike ịchọpụta na ị ga-emepụta otu onye mejupụtara site na ọnụ ọgụgụ ndị na-ejikọta ọnụahịa dị mma.
Ndị ọzọ na-enye ihe ngosi maka otu ha si eme ihe, lee anya ma ọ bụrụ na ị nwere ike melite n'akụkụ ọ bụla nke ọrụ ha. Gbalịa izute ha ma ọ bụrụ na ha bụ mpaghara gị, jụọ ajụjụ ma gee ntị na azịza ha.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị UK nwere ndị ị ga-eme nnyocha n'ịntanetị;
Ogige Alaeze Ukwu Ranjan Bhattarcharya
Mark le Anson Best Author selling of "Dominate Your Ground"
David Sandeman Gbasara Akwukwo Ozi Group -Octioneer
Ego Kevin Wright
Vanessa Warwick na Nick Tadd Tribal Property
John Paul Group Castledene - Agentia Ụlọ
Susannah Cole Ụlọ Ọrụ Ngwongwo Ezi
Tom Entwistle Landlord Mpaghara (Blog)
Vanish Patel Nhazi netwọk azụmahịa
Mark Homer & Rob Moore - Ihe onwunwe na-aga n'ihu
Detuo kacha mma!